Xiddig ka tirsan Inter oo ku dhow inuu u dhaqaaqo Chelsea – Gool FM
(Manchester) 14 Maajo 2022. Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay xiddiga reer Croatia ee Ivan Perišić ayaa ku dhaw in uu ogolaado shuruudaha shaqsiga ah ee uu ugu wareegayo kooxda Chelsea suuqa xagaaga, kaddib markii uu uusan kala heshiisnin Inter saxiixida qandaraas cusub.
33 jirka reer Croatia ayaa markale muujiyay tayadiisa kulankii finalka ee Coppa Italia, isagoo dhaliyay 2 gool taasoo ka caawisay Inter inay 4-2 ku garaacdo Juventus.
Ivan Perišić ayaa ciyaarta kaddib wuxuu muujiyay sida uu uga xun yahay wadahadalada cusbooneysiinta qandaraaskiisa, isagoo xusay in beeca xorta ah ee xagaaga ay tahay suurtogalnimo la taaban karo.
Sida laga soo xigtay Sportmediaset, Perisic ayaa aqbalay shuruudaha qandaraaskiisa Chelsea, waxaana la sheegay inay jiraan faahfaahino yar yar oo ku saabsan in heshiiska uu ku dhammaanayo guul.
Waxay u muuqataa in Inter aysan dooneynin inay sii heysato Ivan Perišić, waxayna u gudbiyeen heshiis uu qandaraaskiisa ku cusbooneysiinayo laba sano kale, kaasoo uu ku qaadanayo 4 milyan iyo bar, laakiin xiddiga reer Croatia ayaa doorbiday heshiis qandaraas 4 sano ah uu ku qaadanayo mushaar intaas ka badan, taasoo ka dhigaysa inuu ku dhawaado u dhaqaaqista Chelsea suuqa xagaaga ee soo socda.